ITOOBIYA oo mowqifkeeda bedeshay iyo wararkii ugu dambeeyey xiisadda NILE. – Xeernews24
Madaxda dalalka Sudan, Itoobiya iyo Masar ayaa magaalada Addis Ababa ku gaadhay heshiis ah in dib loo dhigo buuxinta biyo-xidheenka ilaa ay seddexda dal ka gaadhayaan heshiis dhammeystiran.
Saddexda dal heshiiska ay ku gaadheen magaalada Addis Ababa wuxuu dhigayaa iney ku laabtaan wadaxaajoodkii seddex geesoodka ahaa isla-markaana labada toddobaad ee soo socda ay gaadhaan heshiis kama dambeys ah.
Ethiopia ayaa mowqifkeeda beddeshay xilli qorshaheeda hore uu ahaa inay billowdo buuxinta keydka biyo xidheenka Nile 1-da July, taasi oo dalalka Masar iyo Suudaan ay aad uga digeen.
Dhismaha biyo xidheenkaan ay ku baxday 4.6 billion oo dollar waxaa la dhameystiray 70 boqolkiiba waxaana uu balanqaadayaa bixinta korontada ay u baahanyihiin 100-ka million ee reer Ethiopia- waana meesha uu ka taaganyahay muranka sedaxda dal ee noloshoodu ku tiirsantahay webiga Nile.
Muddo toban sanno ah oo ay adkaadeen wadahadallo u dhexeeyay labada wadan ee webigu maro, Masar iyo Suudaan, iyo dalka uu kasoo billowdo ee Ethiopia ayaa gaadhay muran markii ay Masar geysay Golaha Amaanka ee Qaramadda Midoobay todobaadkii lasoo dhafay.
Masar oo dhamaan webiga Nile ay ku tiirsanyihiin biyaheeda saafiga ah, ayaa ka walaacsan in ay xaqiijiso heshiis adag oo damaanad qaadaya qul-qulka biyaha iyo hanaan lagu xaliyo muranka ka hor inta uusan biyo xidheenku shaqo bilaabin.
Warqad ay u dirtay Golaha Amaanka Khamiistii, ayey dawlada Suudaan uga digtay in nolosha malaayiin qof ay khatar geli doonto hadii ay Ethiopia ku dhaqaaqdo qorshaheeda heshiis la’aan.
Heshiiska la shaaciyey gelinki dambe ee Jimcaha ayaa lagu sheegay inuu noqonayo mid soo afjaro ismariwaagi toddobaadyada taagnaa ee ka dhashay mashruuca weyn ee biyo-xidheenka loo yaqaan GERD.
Jabuuti oo nuuc cusub looga dabaal-degay Maalinta Xoriyadda ee 27-ka bishan... Durbaannada Dagaal ee Madaxweyne Al Siisi iyo Biyaha Webiga Niil !